समस्यामा झेलिएकाहरूको हित र मर्कामा परेकाहरूको ब्यथा बुझ्न शुरु हुन्छ, जहांसुकै पनि कुनै संस्था । आजकाल फेशन, रहर, टकराव, घुर्की, देखासिकी र बदलाभावले जन्मने गरेका छन्, संस्थाहरू । नेपालमा स्थापना भएका अन्दाजी १४५ पार्टीहरूको स्थापनाको वास्तविक अर्थ पनि रहर, टकराव र पद गुमेका वा छाडेकाहरूको स्वार्थपूर्तिका खातिर खोलिएका उदाहरणहरू कसैका सामु छिपेको छैन । कुनै पनि राजनैतिक दल मुख्यत: राजनैतिक सिद्धान्त र निश्चित कार्यदिशा बोकेर समाज सुधार्नका लागि जन्मिन्छन । तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रले चलचित्रको नाम नपाएसरी बिभिन्न अर्थ र वाहनाहरू जोडेर खोलिएका राजनैतिक पार्टीहरूको स्थापना देख्दा जो कोहिलाई पनि उदेक लाग्नु स्वाभाविकै हो । कुरो के जोड्न खोजेको भने, जुन रोग नेपालमा छ, परदेश छिर्दा परदेशीले हाम्रो रोग जांच गरेपनि हामी हाम्रो 'देशको रोग' लिएरै भित्रेका छौं । 'नेपालीको त्यो रोग' न कुनै प्रख्यात डाक्टरले पत्ता लगाउन सक्छ, न कुनै बिश्वबिद्धालयले त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । हामी र हाम्रो मन-मस्तिस्कबाट नछुट्ने रोगको शिकारी-रोगी हौं, हामी । त्यसै रोगले संस्थाहरू छन्, र हाम्रो मनको आंगनीको पवित्र मण्डपबाट स्वार्थहरु अन्मेका छन् ।
नजन्मिनु जन्मिएपछी संस्थाको कर्तब्य केबल जनहितका पक्षमा काम गर्नु हो । दादागिरी, आधिकारिक पदाधिकारीहरूको मनोमानी र अघोशित निर्देशनले टाउकाहरू चल्छन भने जतिसुकै पवित्र नाराले संस्थाहरूको प्रार्दुभाव भए पनि सकरात्मक सोंचको बिकास भएन र साधारणहरूलाई बुझ्न सरल भएन भने 'पवित्र नारारुपी स्थापना' बेकार ठहरिनेछ । संस्थाको एउटा प्रारुप हुन्छ, ढांचा हुन्छ, कार्यतालिका हुन्छ, पवित्र मन बोकेका र सिर्फ सेवालाई धर्म ठान्नेहरूको जमघट हुन्छ, सोच र बिचार हुन्छ, पवित्रवालाहरुको बिचमा सकरात्मक गन्थन हुन्छ, नयाँ-नयां योजनाहरूको मन्थन हुन्छ, कार्यसमितीको बैठक हुन्छ, माइन्युटिङ हुन्छ, बिचार मोथिन्छ र अन्तमा निचोडरुपी नौनी निस्कन्छ । तर आजकाल संस्थाहरुमा धोका हुन्छ, बेइमानी हुन्छ, झुटो बोलिन्छ, आरोप लगाइन्छ, योजनाहरू च्यातिन्छ, आवाजहरू निशेधित हुन्छन्, कोठे बैठकहरूको आयोजना हुन्छ, फोन मार्फत मन मिल्नेहरूको एजेन्डा आउंछ र बैठक हुन्छ, तोकिएको अवधिको दुई घन्टापछी बैठक शुरु हुन्छ, मन लागेका जान्छन्, जसले जे बोले पनि हुन्छ, योजनाहरू मतलब हुंदैनन, ब्यक्तिगत टकरावको हानथाप हुन्छ, फोनवालाहरूको एजेन्डा पास हुन्छ अनि सकिन्छ । कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ, ३२ जनाको कर्यसमिती छा भने मानौं, ४ जना काम गर्न खट्टिन्छन्, पद पाएकाहरू लरक लरक लर्कदैं आउंछन्, तीनलाई माइक चाहिन्छ, तीनलाई भाशण गर्नैपर्ने हुन्छ र सकिन्छ । यहां स्पष्ट के पार्नु छ भने देख्दा नजिकैको जस्तो लागे पनि वा भनौं कुनै संस्थालाई नजिकै औंला ठड्याएजस्तो लागे पनि हामीले 'नेपालदेखी लिएर आएको त्यहि रोगले' गालेका मनहरूको संस्थाको हविगत संसारैभरी यस्तै छ । फेरि देखिंदा र केही लेखिंदा, हिजो आफू बसेको बेलामा राम्रो र निस्किएपछी आरोप भन्ने गाल पनि आउंन नसक्ने त कहाँ हो र ? काग कराउंदै छ, पिना सुक्दैछ र सत्य कहिल्यै डग्दैन । आरोप भन्दा सुध्रनुको पछाडी मान्छेहरू लागे भने मात्र संस्था जिवित बन्छ । प्रचुर प्रचारवाजीमा समय खेर फालेर आफ्ना एजेन्डाको बेलिबिस्तार गर्नेहरूको हातमा संस्था पुग्यो भने भोलीका दिनमा संस्था भित्र पार्टीगत गुटबन्दीको राजनीति भन्दा केही नहुने ग्यारेन्टी छ ।
यहां संस्थाले कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्छ, त्यसै भित्रका कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई थाहा हुंदैन । र फेरि कुनै सदस्यहरू थाहा पाएपनि जानकारी बिहिनको नाटक गर्छन् । आयोजित कार्यक्रममा कसले माइक समाउने होडबाजी हुन्छ । मन्चमा बोल्नेहरूको कुस्ता-कुस्तीले बोल्ने चिट्ठा अर्कैलाई पर्छ । सहभागीहरू मनोरन्जन खोज्छन्, तर बैशाखमा देउसिरे घन्किन्छ । प्रवासमा हुने यस्ता कार्यक्रमहरूले समाजको हित कसरी हुन्छ ? अगाडी बिशिष्ठ अतिथि चस्मा लगाई लगाई घोरिएर कार्यक्रम हेर्छन्, पल्लो गाऊंको कुनै संस्था वालाको संस्थापकले प्रमाण पत्र बांड्छ । बुझ्नेहरू भित्रै भितरी चुप हुन्छन्, नबुझ्नेहरू नौटंकीको ताली पड्काउंछन । अब हेर्दै जानुपर्छ, प्रवासमा संस्थाका लागि राखिने नामहरूको अभाब हुने छ र नामको संकट लाग्ने छ । हामीले समाजसेवाको रवाफमा जतिसुकै छाती पिटेपनि हिजोकी एसएलसी फेल रेखाले हामीलाई होमलेस भन्दै जानेछिन । र, होम भएर पनि सन्तोष नपाएकाहरूको आवाज लेस हुनेछ र अर्को बर्ष आउने नव-नायिकाले तपाईं हामीलाई भिखारीको सम्मान दिएर जानेछिन । समुदायको सेवा चाहनेहरूको आवाजमा हेल्लो भन्ने कोहि हुनेछैन । दहिचिउरेहरूको बोलवाला हुनेछ । कसैले सत्य लेख्यो भने 'पत्रकारिता'को प्रमाण खोज्नेहरूको बिगबिगी हुनेछ । सत्य बोल्ने, सुन्ने र जान्नेहरुलाईं 'एक बोत्तल बियर' मा बिक्ने ट्याग लगाइनेछ र तिनीहरू चाहिं ह्विस्कीको चुस्किमा बदनाम र खुराफातको राजनीति रच्नेछन । त्यसैले लाग्दछ, संसारमा क्यान्सर रोग निदानको ओखती भन्दा खुराफातमा रम्ने नेपाली मानसिकताको निदानको ओखती पहिले पत्ता लागोस् ।
कुलतमा फसेर खल्ती रित्तिएको अभागी अभावीले सहयोग नपाएका उदाहरणहरू यहि आंखाले देखेका छन् । एक छाक खानलाई सहयोग पाएपनि एक निद्रा सुत्ने ओछ्यान नपाएको यहि आंखाले देखेका छन् । हामी मिलियन डलरको प्रोपर्टीमा ३५० जना अट्ने सभाहल भएको गर्ब गर्छौं, तर निद्राले झुलुम त्यो अभागीलाई एक प्रहर सुत्ने र स्वदेशको सपना देख्ने निद्राको लागि एउटा च्यादर र तालाबन्दी कोठाको सोफा दिंदैनौं । र हामी भृकुटी नेपालकी छोरी, सगरमाथा नेपालमा, बुद्ध नेपालमा जन्मेको र रामको ससुराली जनकपुर भन्दै उफ्रन्छौं । हाम्रा अगाडी चाहे कुलतमा फसेको धनी बाउको छोरो होस्, तर उसको अभावमा साथ् दिदैंनौं भने हाम्रा मुलुकमा बुद्ध जन्मे नि के ?, सगरमाथा संसारको टुप्पो भए पनि के ? के अब बुद्ध आएर प्रवासमा दु:ख परेकालाई पैसा दिन्छन् ?। या सगरमाथा आएर नडराओ नेपाली हो, म यहां छू भनेर ठिङ्ग उभिन्छ ? यसरी नै देखिन्छ कि, अमेरिकाको मात्रै उदाहरण लिने हो भने पनि न्यूयोर्कमा करिब सय वटा संस्था छन्, खोइ त ? भोकभोकै सडकमा सडेका ती युवाको हरिबिजोगमा कसले सहयोग पुर्यायो ? बाल्टिमोरमा ३५ वटा संस्थाहरू होलान्, कालीको प्रेममा अनाहकमा मरेका एक युबकको लागि के सहयोग भयो ? टेक्सासमा त्यति नै संस्थाहरू छन्, तर समुदायको बिकासमा लागेका भन्नेहरूले पोहोरको ए एन ए सम्मेलनमा केही सहयोग गरेरन । बोस्टोनमा १५ वटा जति संस्था छन्, पवित्र लागे पनि ती पनि राजनीतिबाट ग्रसित छन् र लस एन्जलसमा छोटो अबधिमा १०/१२ संस्थाहरू भए । कसले के कति गरे, 'पत्रकारिताको परिचय-पत्र' नभएकाहरूले लेखेर के हुन्छ र ? तर सत्यमेव जायेते, कन्ना पछाडि खुराफात गर्नेहरूको पर्दाफास भगवानले एक न एक दिन गर्नेछन र अत्याचार, ब्यभिचार र अमिल्दो किस्ताबन्दीको कथा कुनै न कुनै कलमले एक न एक दिन त अबश्य लेखिनेछन । समाज बनाउंछु भन्नेहरू पनि चेपारेको लेपन लगाएर तेल घस्ने बहानामा गोपनियता खोतल्दै नजिक हुने बानी नपरेको कहाँ हो र ? अत: समाज परिवर्तनको बिचार र आवाज मिचेर, सत्यवादीहरुका निरन्तर् प्रयासलाई थिचेर, र सम्भावनाका याबत कुराहरूलाई मिचेर संस्था सायद् अगाडी नबढ्ला, नेपालमा होस् या प्रवासमा ।
Posted by KhullaManch TV Links to this post
भोको मेरो आंत मेटाउन माम खोज्यौ आमा,
परिवार खुशी पार्न केवल काम खोज्यौ आमा !
च्यातिएका चप्पल, लुगा न टांक न फस्नर,
तिनलाई टाल्न हरबखत दाम खोज्यौ आमा !
दु:खका थे हरदिन शत्रु मात्रै जता-ततै,
जहानको सुख देख्न अर्कै गाम खोज्यौ आमा !
खरका छाना उडाइलान्थे हुरी बर्षातीले
खलो खनी स्याउला पन्छाइ घाम खोज्यौ आमा !
तिम्रो काख छोडी आज बिदेशिनु परेको छ,
आंखाका ती आंशु लेख्दै खाम खोज्यौ आमा !
छिमेकीले पठाउंथे चिठ्ठी पत्र शिलबन्दिमा,
हुलाकीको झोला खोली मेरो नाम खोज्यौ आमा !
हा हा मेरो देश !
लोडशेडिङको झिपिक्क अन्धकारमा नयाँ सिंगापुर बन्ने धोकोको साथ अझै पनि नेताहरूको झुटा बातमा नतमतस्क छ, नेपाल । एयरपोर्ट देखि गाऊंका गल्ली-गल्लीमा चेलीहरू बलत्कार भएका घटनाहरू छिपेका छन् । भ्रस्टाचार, घुसखोरी र अत्याचारले सिमा नाघेको छ भन्ने थेगो त सिन्को नभांच्ने नेता भनाउंदाहरूले अलाप्ने मन्त्र भैहाल्यो र पनि सत्यतामा देश घनघोर आपत्तीमा पारेको कुरा नकार्न सकिदैंन । खोला र नदीहरुका पानीमा संसारको दोस्रो धनी मुलुक दिनदिनै निभ्दै गएको छ । कुनै गुहिय खोलाबाट गाउंको धारामा पानी खस्दैन । टुकीमा बाल्ने मट्टितेल, चुलोमा बसाउने कसौंडी, कराईमा पकाउने बिखय, तिहुनमा मिसाउने मसला, चियामा राख्ने चिनीहरुका बात गर्न थालियो भने सम्झन मन लाग्छ, जनताका करले पालिएका ती देश बनाउनेहरुका समाजबाद, नौलो जनवाद, क्रान्तिकारिता, नयाँ नेपाल, गणतन्त्र र सिंगापुर बनाउने दस्तावेजहरू । अनी भन्न मन लाग्छ, हा हा मेरो देश ।
राम्रो भए आहा भन्ने न हो । दुनियाँ हसाउंने चैतेहरूको चालाले सतीले सरापेको आफ्नै मुलुकलाई 'हा हा' भन्नु परेको छ । आज बिनोद चौधरी संसारका अरवपतिमा नामाङ्कन भएकोमा त्यसै त ठुलो नाक झनै ठुलो बनाएर कखरे ऋशी धमलाहरुका क्यामेरा अगाडी धनको धमास लगाउंदै छन् । चन्दा दिन थाकेर कुनै न कुनै राजनैतिक पार्टीको 'नेता' बनेका बिनोद चौधरीहरूले छातीमा हात राखेर सोचुन्, बटुको थाप्दै एक छाक टार्न बसन्तपुर्, भक्तपुर र पशुपतीमा सुकी माग्नेहरुका लागि के गरे ? बांसबारी छाला जुत्ता कारखानामा गंगालाल मुटु अस्पताल बनाउने भगवान कोइरालाहरुका अगाडी देशभरका बन्द औद्धोगिक क्षेत्रमा कुहिएका छाप्राहरूमा ब्यवसाय संचालन गर्न के गरे ? तिनले चिल्लो प्राडो चढेर हिड्ने ठमेलका गल्लिहरुका फोहोरका थुप्राहरुमा भोकको उपाय खोज्ने सडक बाल-बालिकाहरुका लागि के गरे ? कुनै खेतान र चौधरीहरू अरवपती भएको डाहको आवेगमा नभै कहलिएका अरवपती बिल गेट्सहरूले गरेका सामाजिक कार्यहरूको सिको गरे पो आफ्ना मुलुकका कोही चौधरीहरूका नाम टाइम्स र फोर्ब्स पत्रिकामा आएकोमा हामीलाई गर्व हुनेछ । कयौंपटक बैंकहरूले कर नतिरेको कालोसुचीमा सुचित भएका नव-अरवपतीहरूले भारतमा किनेका ब्यक्तिगत जेटको बखानले, कांचको पर्दामा धमलाहरुले लिएका चौधरीहरुका अन्तर्वार्ताले हुम्ला र मुगुका गरिवहरूको छाक टारिन्छ र ? हे भगवान् ! शक्ति र पैसाको पछि-पछी कुद्ने संस्कार भएको मुलुकमा भगवान कोइरालाहरूले राजिनामा दिएका घटनाहरू महत्व हुंदैनन्, बिनोद चौधरीको सम्पत्ति बराबर समाजसेवामा लगाएका उपेन्द्र महतोहरुका चर्चा हुंदैनन्, बिकट पहाडी जिल्लाहरुमा नि:शुल्क आँखाको ज्योति बाल्ने रुइतहरु समाचार बन्दैनन र प्रविधीले डोको र नाम्लोमा संचार दिलाउने महाबीरहरुलाई सुन्दैनन र भन्न मन लाग्छ, आहा चौधरीहरूको सम्पत्ती, गरीब जनता र हा हा मेरो देश ।
एउटा प्रधानमन्त्री भारत जान्छन्, समकक्षी सिंहहरू कतै गर्जदै गर्दा भारतीय प्रान्तको सहायक मन्त्री हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई बिमानस्थलमा फुलको गुच्छाले स्वागत गर्न आउंछ । अचम्म लाग्छ, हेप्नेको नि सिमा हुन्छ यार भैया । समकक्षी भट्टराईपट्टी लात्ती पलेटी फर्काउंदै बिप्पा सम्झौता हुन्छ । सिंहका दुतावासका स्यालहरू बिना सूचना नेताहरुका खोपीमा पुग्छन । नेताहरू ति प्रभुका पाऊ पर्छन । मन लागे प्रधानन्यायधिश, सन्की चढे सेनापती र फाईदा बढी मिल्ने भए सी डी ओ लाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिन्छन् । नेताहरू ज्यु-हजुर गर्दै अगाडी इन्कार गर्न नसकेर महाधिवेशन, महासमितीको बैठकहरुबाट न्यायपालिकाका प्रमुखलाई राज्यप्रमुख बनाउने उद्घोश गर्छन । ति स्यालदुत आफ्नो दर्जा माथिको रास्ट्रपती भेट्न अचानक बेखबर चिसोनिवास पुग्छन् र आफैंले चाहेको हाम्रो देशको भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको लालमोहर लगाउन दवाव दिन्छन् । यहां सम्झन मन लाग्छ, कुनै बेला भैयाहरूको धम्कीलाई प्रवाह नगरि हेलिकप्टरबाट नेपाल मट्टितेल भित्र्याउने साहस गर्ने मरिचमान सिंहले झैं भैयाहरूलाई नै ढाडस दिने नेता कहीले जन्मेला ? मुलुक गरीब हुनाकै कारण र दहिचिउरेहरूको दोधारे चाकारीबाजले सगरमाथाको शिर भैयाहरूको पाउमा राख्नुपर्ने हाम्रो यो कस्तो भाग्य ? हा हा मेरो देश ।
सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने भनि जनताले मन पराएका पुलिस रमेश खरेलले कहिल्यै काम गर्ने ठाउँ पाउंदैनन । जिर्ण जुत्ता कारखानालाई मुटु कारखाना बनाएका भगवान कोईरालालाई काम गर्ने वातावरण दिंदैनन । बिकट नेपालका गाऊंमा इन्टरनेट पुर्याउने माहाबीर पुनले सरकारको सहयोग पाउंदैनन । गरिबका आँखाको ज्योति दिलाउने डा. रुइतको कामको प्रशंशा छैन । देशमा सहि कुरा अबलम्बन गर्नेले प्रोसाहन पाए पो बन्छ देश । गरीब चुसी लुटेको धनको साहसमा डनहरूको चलेको देशको कसलाई चिन्ता ! निमुखाका सामु खाएका कसम भूली चप्पल त्यागी महलभोगी भएका मार्क्स, लेनिन, माओ, गान्धी र बि पि को नाममा झुटा राजनीति गर्नेहरुका रबैयाले त डुब्यो देश । डाडु पन्यु हुनेले हो रजाईं गर्ने । निमुखा हामीहरू लोडषेडिङको अंध्यारोमा किरा परेको असारे आंप खाए जसरी घुसखोरीहरूको आश्वाशन खांदै बस्नुको के बिकल्प छ र ? उज्यालोमा आफ्नै टाउको माथी उडेको संगै खुलेको थाइ एयरलाइन्सको हाजात हेर्यो अनि गच्छदारको लगानीको यातायातमा काठमाडौं जांदा थाइको दाइ नेपाल हाजात कम्पनीको सुनधारास्थित बाँकी रहेको जस्ताको छानो र ईंटाको छाप्रो हेर्यो, गोंगबु लाग्यो । हा हा मेरो देश ।
Posted by KhullaManch TV Links to this post Labels: अनौपचारिक
झापड, जुत्ता, बुइं र कुर्सी
बिद्धालयमा समयमा 'घरकाम' (होमवोर्क) बुझाउन नसक्दा शिक्षकका दाहिने हातबाट गालामा तोरीको फूल देख्ने गरि झापड खाएका सम्झना शायदै लाई होला । शैक्षिक भ्रमण जनाका लागि होस् या पिकनिक जानाका लागि, राम्रा झोला किन्न होस् या बरफ् चुस्नका लागि गरीब घरमा पैसाको माग हुंदा उदेश्य पुर्तीका अलावा बाबु-आमाका हातले मिलेका झापड सम्झदा कसैका मन अहिले पनि कुंडिंएलान । पार्क र सपिङ मलमा प्रेमिकाले इच्छाएका बस्तु करिद नगरिदिंदा सोझो प्रेमीले प्रेमिकाको कोमल हातबाट पाएको झापड पनि कतिलाई सम्झना होला । वा, अर्काकी धनी छोरीलाई मन पराउने गरीबले पाएको झापड, अर्काकी प्रेमिकालाई मन पराउंदा पाएको झापड, खेतमा पानी लगाउन जांदा कुलो बिगारेकोमा सदिंयारेले हानेको झापड र जढ्याहा श्रीमानलाई बाहुको बिहे देख्ने गरि श्रीमतीले बजारेका झापडहरुका पनि सबैमा आ-आफ्नै कहानी होलान् । साथीले माया गरेर गालामा दिने मायालु झापड, प्रेमीले मायालु पाराले प्रेमीकालाई दिने झापड र जहानमा, घरमा, बिद्धालयमा, पाटी-पौवामा हुने झाप्दको खेल-खेलाई र हांसी मजाक साच्चै भएपनि त्यसले खासै चर्चा पाउंदैन ।
तर जनताको जीवनस्तर बढाउंने कसम खाएका झलनाथहरूलाई हजारौं मान्छेका अगाडी एउटा कार्यकर्ताले हान्ने झापडको अर्थे कति हुन्छ, यहां बताएर क होला र ? झलनाथलाई हल्लिने गरि हानिएको देबीप्रसादको झापड, झक्कु सुबेदीलाई भक्कुमार हानिएको कसैको झापड र शुशिल कोइरालालाई सुरुक्क भर्खरै हानिएको फोटो फ्रेमको झापड देख्दा असामन्य लागे पनि तिनैका कार्यकर्ताले भगवान माने जस्तै मानिने पार्टिका नेताहरूलाई एक पछि अर्को गरि लाठी र कुर्ची किन प्रहार गरेका छन् भन्ने कुरो ठुलो हो । माधव नेपाललाई पाउमा ढोग्नुपर्ने कार्यकर्ताले उचित सम्मान पाउंदैन भने भोलि सार्वजनिक कार्यक्रममा माधव नेपाललाई झापड हान्नु ठुलो कुरो होईन । माधव नेपालको पाउमा जबर्जस्त ढोग्ने कार्यकर्ताले भोली माधव नेपाललाई गालामा सामान्य छोए भने पनि धुलिराम कुटाइ खाने त आखिर ढोगाएइका ती पीडित कार्यकर्ता हुनेछन्, तिनलाइ भरौटेहरूले मरणासन्न हुने गरी पिट्नेछन्, जसरी हिजो प्रबेश बस्नेत पिटिए । हो, सार्वजनिक कार्यक्रममा आगन्तुक पाहुनालाई हात हाल्नु मर्यादा र नितिगत बस्तु भन्दा बाहिरको कुरो हो । तर पार्टीको सम्पत्तिमा आफ्नो एकाधिकार जमाउने, आफ्नै बोलवाला मात्र बढाउने, परिवारबादलाई प्रश्रय दिने, कामको नाममा गुटको पूजा गर्नेहरूलाई 'झापड' काफी हुंदैन । त्यो पनि एक प्रकारको आन्दोलन हो । सुधिने मौका सिकाउने पाठ हो । सार्वजनिक कार्यक्रममा सुरक्षा दिन नसक्ने फितलो प्रशासनलाई पनि दरिलो झापड हो । देबीप्रसाद र बस्नेत पार्टीगत बिरक्तताको आन्दोलनको प्रबेश पात्र मात्रै हुन् । छ/छ बर्षसम्म जनताको नाममा सिन्को नभांच्नेहरूलाई दीइएको खुल्ला चुनौती हो । भोलि यसैगरि गच्छदार, यादब र प्रचन्डहरू पनि झापड नखालान भन सकिंदैन ।
जसरी पार्टीको अरबौं रुपैयां उपेन्द्र महतोसंग हाइड्रो पावरमा लगानी हुन्छ, गोल्छाको जस्तापाता कारखानामा लगानी हुन्छ, चौधरीको चाउचाउमा लगानी हुन्छ अनि खेतानसंग बैंकमा लगानी हुन्छ त भने तिनीहरूको वास्तविकता बाहिर नखुलुन्जेल अब क-कसले झापड खान बांके छ, त्यो त समयले देखाउने कुरो हो । होईन भने कर्मठ कर्मचारी ब्रिन्दा हाडा मन्त्री महेन्द्र यादबको भ्रष्टाचारकी बाधक बनेर किन सरुवा भइन ? एउटा साथी भन्दै थिए, गच्छादारको एक दिनको कमाई एक करोड हुन्छ रे । नक्कली नागरिकता र पासपोर्टको मात्र पनि हिसाब गर्ने हो भने उनको कमाई एक दिनको करोड नाघ्छ रे । सुन्दा 'रे' लागे पनि वास्तविकता यहि हो । बरियतामा परेका एउटा मामुली प्रहरीको बढुवा किन महिना दिन रोकियो ? बाबुरामले ५४ करोड वा गच्छदारले ७३ करोड घुस खाने बहानामा बिचरा निबर्तमान प्रहरी प्रमुखले साबिकको बिदा पाएनन । राणा, राना, शमशेर र थापा जो आएपनि हामीलाई चाहिएको सुरक्षा हो । तर एउटा सुरक्षा प्रमुखको नियुक्तीको प्रसंग आधा अरब भन्दा बढीको मिलमोलाइमा बिक्छ भने नेपाल सरकारका खाली रहेका प्राय सम्पुर्ण संस्था र आयोगगका प्रमुखहरूको नियुक्तीको लागि गच्छदार र भट्टराईहरुका स्विस बैंकका बचत खाताका ट्रान्जेक्सन कति बढ्लान्, स्विस बैंकमा अन्तराष्ट्रिय रेमिट्यान्स प्रमुखलाई थाहा होला । यी र यस्ता अप्रासांगाकिक कथाहरूले बढवा पाइरहेको अन्यौलतामा हिसिला यमीका चुरीफिरी किन नबढुन ? उनैका दिदिहरू संस्थानहरुका प्रमुख हुनु सानो कुरै भएन । तर निरन्तर जनताका कसम खाएका इमान्दार कर्मचारीले कुनै अधिबेशनमा गच्छदारहरूलाई झापड हान्नु कुरो नौलो भएन ।
यहां बोल्नेहरूको आवाज थुनिएको छ । लेख्नेहरुका निप थुतिएका छन् । पढ्नेहरुका किताब च्यातिएका छन । सांचोबोल्नेहरू मुक्तिनाथ अधिकारीहरूजस्तै गरि रुखमा झुन्ड्याइएका छन् । सहि काम गर्नेहरुका छाती गोलीले पड्काइएका छन् । के झुन्ड्याएको शरीर हेर्न जनाअन्दोलनको उदाहरण सापटी लिनु पर्छ र ? नत्र त किन मेलम्ची ठेक्का रद्ध हुन्छ ? कुनै ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता पत्र टेबलमा राख्नु भन्दा पहिले कति घुस दिनुपर्छ ? त्यो त पोखरा बिमानस्थलमा बुझाएको घुसको नजिर नै काफी छ । अब फेरि रद्ध मेलम्चीको पुनर्बाहालीको लागि कति करोड घुस छुट्याउने ? त्यो कसले खाने ? कहीले टुंगो लाग्ने र पानीको पाइप गाड्न सुरङ्ग खनिने ? काकाकुल जनताले पांच तारे होटलमा भोलि हुने 'मेलम्ची परियोजना ?'को बैठकमा तिनका टाउकेहरूलाई झापड हान्दा के बिग्रन्छ ? हरेक कुरोको बिकसित घटनाक्रम हुंदोरहेछ । इराकमा जर्ज बुशलाई झापड हान्न अल्छी लागेर ती पत्रकारले जुत्ता हानिदिए । संसारले हेरेको त्यो टी भी स्क्रीनले कुशल शिकारीले धनुवाण हाने जसरी बुशलाई जुत्ता हानेको सर्लक्क देखाइदियो, जुत्ता हान्दा बिचरा के सोचे होला, बुशले ? त्यो भन्दा लाजमर्दो कुरो केही हुन्छ र थियो ? समाचार र शक्तिले घटनालाई जसरी जता मोडेपनि दुनियांको शक्तिवाललाई जुत्ताको गोली प्रहार सानो तिनो इज्ज्तको सवाल होईन । बुझ्नेले जुन हर्कतले बुझे पनि हुन्छ । तर सामान्य भाषामा त्यो पत्रकारको मुटु सानो थिएन । भनिन्छ, जब मान्छेले मान्छेलाई मान्छे गन्दैन, तब मान्छेले मान्छे हुन मान्छेकै साहारा लिन्छ । तर मान्छेले मान्छे हुन झापड र जुत्ताको पनि साहारा लिने दिन आएछन अब । र त आफ्नो गुम्सिएको रिस पोख्न पत्रकारले जुत्ता हनिदियो । हाम्रा नाममा कसमा खाएका ती ६०१ 'भत्ते' हरूलाई भोली कथमकदाचित हुने चुनाबको भतेरमा हजारौंले स्वागत स्वरुप जुत्ताका माला लगादिए ठुलो कहानि नहुने भो अब । साझा बस बिलायो, गच्छदारको अग्नि यतायातले किन दिनानुदिन नयाँ बस थपिरहेको छ ? दुर्-संचार डुबिसक्यो, किन संचालक थाहा नभएको एनसेलले एकछत्र राज गरिरहेको छ ? बाबुरामको गाउंको र दक्षिण एसियाको ठुलो गोरखकाली टायर बन्द हुन लाग्यो, किन महिन्द्राको टायर कन्टेनरका कन्टेनर आयत हुन्छन् ? बनका सारा जडिबुटी सकिए, किन यार्सागुम्बाहरू बेच्न गच्छदारका भरौटेहरुका ट्रक रातारात भारत जान्छन ? गोर्खे खुकुरीको शान मासियो, हरेक पार्टीका भिजिलान्तेहरू कसरी थ्री नट थ्री पकेटमा बोकी हिड्छन ? चौध घण्टा लोड्सेडिङ हुन्छ, किन कालीगनडकी र मर्स्याङ्दीको पानीमा राजनीति हुन्छ ? जीबनजल छैन, किन आफैले खाएको गरीबको धुरी उडाउने रवाफ देखाउंदै ४ लाख खर्च गरेर प्रधानमन्त्री जुम्ला जान्छन ? क्यान्सर भएर जगदिश घिमिरे मार्न लागि सके, नारायणकाजीको उपचारको लागि केटी पी ए सहित जापानमा ४ करोड सरकारी ढुकुटी रित्याइन्छ ? गरिबका घरमा भुटुन छैन, किन प्रचन्डका टाउकामा जेल टल्किन्छन ? राउटेलाई एकसरो लुगा छैन, किन शेरबहादुरलाई छाकै पिच्छे बियर चाहिन्छ ? झमक घिमिरेलाई लेख्न मसी छैन, १ किलोमिटर परै फ्रान्सेली अत्तरले किन झलनाथ बासाउंछन ? दशैंमा पाहुना पाछा सम्याउन गरीबको हैसियत छैन, किन सुजाता इटलीमा करोडको झोला किन्छिन ? यस्तै असमानताले जब जागजेहर गर्ने मैदान पाउंदैन, तब त्यहि असमनताका भुक्तभोगीहरू मैदानबाटै गोल्ड्स्टार जुत्ता र पायल चप्पल नेताहरुका मुखमा हान्न पछि पर्दैनन ।
आफूलाई क्रान्तीका नायक भन्नेहरू कार्यकर्ताका बुइं चढेर खोला तर्छन । झलनाथले प्ररायु संघका कार्यकर्ताको बुइं चढेर खोला तरेको सबैले देखे । अर्जुननरसिंहले नुवाकोटको खोला पनि त्यसरी नै तरे । तराइमा यादब र गच्छदारहरूलाई त भारतीय ट्रयाक्टरले ने खोला तारिदिन्छ क्यार ! प्रचन्डजीलाई बुइ चढाउनेहरू कति-कती ! मुस्ताङ वारी पार्क गरेर सुरक्षाकर्मीका लावालस्कर सहित राउटेको घरमा भात खा'को जनबाद र कम्युनिज्म देखाउन भट्टराई बुइ चढे । आखिर यो ढोंग किन ? समाजबादको लागि जीवनको सर्बश्व दिएको भनि नथाक्ने कांग्रेसीहरू एउटा खोलो तर्न सक्दैनन ? त्यसो भए लौह पुरुष गणेशमान जेलको ढलबाट कसरी बाहिर निस्के त ? १५ हजार नेपालिको रगतको खोलो बगाएर संसारको अलौकिक क्रान्ती गरेका र गोरखा जेल ब्रेक गरेका कार्यकर्ताका नेताहरु खोलो तर्न सक्दैनन ? जनताको रगतमा होली खेल्नेहरु, हिलोमा पाइला राख्न सक्दैनन ? के हिलो र खोलोमा टेक्दा प्रचन्डको ३ लाख पार्ने घडिमा पानी पस्छ ? कस्तो चिमचिमे घडी उपहार पाएका रहेछन् तिनले ? पानीमा पाइला राख्दा प्रचन्डको ४ लाख पार्ने खाटमा सेप लाग्छ ? जुका टांसिन्छ ? झलनाथको अत्तर पानीले चिस्याउछ ? के सीको कपाल पानीले तालु बनाइदिन्छ ? पसिनाले डुङ-डुङ गनाउने यादब र गच्छदारहरूलाई त पानीले फ्रेश गराइदिनु पर्ने हो । तर पनि हामी खोला तार्ने बाहानमा यिनीहरूलाई किन बुइ चढाउंछौं ? त्यति सस्तो छ, हाम्रो बुइं ? हाम्रो इमान ? त्यति नालायक पिठ्युं हो हाम्रो ? भ्रष्टाचार र लाचारहरूलाई बुइंमा राखेर दासताको असली 'भरौटे' भएका छौं, हामी । नेताको पहुंचमा पुग्ने विश्वाशपात्र न हो कांध थापी आउने, तिनलाई बोक्न । एउटा हैसियतवाला कार्यकर्ताको हबिगत त यसरी भरौटेको पारा हुन्छ भने, नेतालाई ईन्द्र भगवान जस्तो मान्ने अबुझ सर्बसाधारणको बुझाई के होला ? राष्ट्रियता र आन्दोलनको नाममा धेरै बर्षहरू दियौं हामीले । अवसर दियौं, भत्ता दियौं, खानलाई भनेर छानी-छानी मन्त्रालय दियौं, मेलम्ची दियौं, सुस्ता दियौं, कालीगन्डकी दियौं, संगसंगै खोलेको थाइ एयरलाइन्स हेरेर आंशु झार्दै नेपाल वायुसेवा निगम दियौं, आयल निगम दियौं, प्रहरी प्रशासन दियौं, दूर्-संचार र केही त बांकी छ अब सिध्याउन । सत्र हजार बुवा-आमा, दाजु-भाइ, दिदि-बहिनी र नावालक दियौं, गोला बारुद दियौं, साथमा भा'को बन्दुक दियौं र हातमा भा'को पौरख दियौं । हामीले के दिएनौं र ? र यिनीहरूले हामीलाई त्यस्तो के दिए, जसको पुरस्कार स्वरुप अब बांकी रहेको एउटा कांध पनि दिंदैछौं ? सुन्दा, देख्दा र पढ्दा क्रान्तिकारिता लागे पनि पाउंन्जेल कसैले कांध दिन्छ, जसले धोका खान्छ उसले झापड दिन्छ अनि जुत्ताले झटारो हान्छ ।
झक्कु पनि झुक्किदैनन अब, झलनाथलाई चेत आयो नै होला । तर क्रम सकिएको छैन । अस्ति भर्खर एमालेका कार्यकर्ताले एउटा केन्द्रिय नेतालाई गोरखामा मोसो दल्दिए क्यार ! र यिनिहरुका गन्तब्य भनेका केबल कुर्सी रहेछन् । आफूले त पाए-पाए । अरुलाई दिदैंनन । भतिज, काका, सासु, साला र सालीहरू यी सबैका पार्टीमा आसिन छन् र आश्रीत छन् । श्रीमती र छोरा छोरी त हकदार नै भए । हामीले सर्वश्व दिए पनि यिनको सर्वश्व कुर्सी मात्र रहेछ । तर गुलियो पनि बढी खायो भने तितो हुन्छ । तिनीहरू बस्ने कुर्सी नै तिनिहरुका टाउकामा बजारिन थालेका छन्, आजकाल । हो आजकाल, आजकाल तिनका पार्टीका सम्मेलनहरुमा कुर्सी हानहान छ । बालाजुमा आफु-आफु कुर्सी हान्दै भाइहरू छुट्टिएर बसेका छन् । हिसाब-किताब प्रतिशतमा मिलाउने सम्झौतामा कुर्सीको लहरो हल्लिएको छ । अरबौंको हिसाब-किताब त कसरी मिल्ला र सजिलै ? भोलि कसको टाउको फुटेको पढनु पर्ने हो, त्यहि छ पिरलो । कारोबारमा नमिलेको उकालीको कुर्सी झगडा सानु बाटो छा भिरालो -- । भाई भाइको कुर्सीले के देखाउने हो, यहि छ पिरलो । कुर्सी झगडा होईन भने, ने बि संघको सम्मेलन किन गर्न सक्दैन, कांग्रेस ? एमालेको अनेरास्वबियुको हानथाप र परशुरामहरूको बोलवालाले स्थगित भएको धेरै भएको छैन । माओबादीहरुका जबस सम्मेलन पुरै स्थगित छन् । भाइ-भाइको कुर्सीरुपी अंश र पैसाको हिसाब-किताबको लेखा जोखाले कट्टेल र पन्तका भारदारहरू बिच हानथाप छ । भट्टराई र दाहालहरू त ठुलै खालका हिसाब मिलाउनेहरू भए । यी यस्ता मेसोमा गगन थापाहरू हराएका छन् । रबिन्द्र अधिकारीहरू सेलाएका छन् । हेमराज भन्डारीहरू ओइलाएका छन् । लेखनाथ न्यौपानेहरूलाई लत्त्याइयो । बिश्वप्रकाश शर्माहरू हराए । आशाका भांटाहरू पनि टांट पल्टिएपछी तिनीहरू पनि कुर्सीको लागि दगुरेको प्रमाण हुन्छ । होईन भने, हिजो गोदावरी रिसोर्टको न्यानो कोठा, चिसो चुस्की र पिरो चिकेन चिल्लीको बिरोध गर्ने थापा, अधिकारी र भन्डारीहरू अनेक बहानामा किन गोदावरी कुंदिरहेका छन् ? काम नभए हरिबंश र मदन दाइले जस्तै कुरिलो खेती गरे भैहल्यो । कुर्सीको लागि राजनीति होईन भने बिस्वप्रकाशजीले लेख्नुभएको गीतमा फिल्म नपाएर धिरेन शाक्यले झैं म्युजिक भिडियो खेले भैहाल्यो । इमान्दार नेताले इमानको राजनिती गर्न सकेन भने मरेर पनि आज बि पी को नाममा कहां धूप बलेको छ र ? मदन भन्डारीको जबज खै ? मनमोहनको आफ्नु गाउं-आफैं बनाउन को लागेको छ ? पुश्पलालको अस्तित्व खोइ ? बर्षमा एक दिन शालिकमा टाउकेहरूले फूल अर्पण गरेर हुन्छ र ? त्यत्रो शाशन गरेर बिद्धा भण्डारीले आफ्नो श्रीमानको हत्यारा पत्ता लगाउन के गरिन ? झापा आन्दोलन गर्ने सी पीको हालत हेरे हुन्छ । पन्चायतताकाका निर्णायक बार्तावाल राधाकृष्ण कहाँ पुगे, पुगे ! जातियताको नाममा गोरेबहादुरले राजाको हातको टीका लाएसरीको राजनीति के राजनीति ? एन जी ओ खोले हुन्छ । धन्न अनुराधा कोइराला, रबिन्द्र मिश्र, पुश्पा बस्नेत, दिलशोभाहरूले इज्जत राखिदिएका छन र नेपाली भन्न पाइएको छ । रचनात्मक कामको लागि इमान्दारिताको राजनैतिक पापड नमोलिए, केबल कुर्सीका लागि लटारो रहिरहे झापड्, जुत्ता र थाकेका बुइंहरुले भोलि फेरी-फेरि के गर्लान्, के गर्लान ! अस्तु ।
Posted by KhullaManch TV Links to this post Labels: ब्लगिङ
त्यो नभए'सी !
आफ्नाहरू टाढा हुन्छन्, नाता टुट्दै जान्छ,
हात रित्तो हुदैं जान्छ, यहां त्यो नभए'सी,
कथाहरू लेखिन्छन्, कबिताहरू कोरिन्छन्,
बबिताहरू रिसाउंछन्, त्यो नभए'सी ।
ताप्के सुक्छ, कराइ डढ्छ, कसौडीको के हाल ?
चामल पनि भुसुन हुन्छ, त्यो नभए'सी,
चाहहरू मर्दारहेछन्, सपनाहरु झर्दारहेछन्,
हेला सबले गर्दारहेछन्, त्यो नभए'सी ।
सुन पित्तल हुंदोरैछ, सम्झि मन रुदोंरैछ,
बचनले छुदोंरैछ, यहां त्यो नभए'सी ।
झुपडी चुहिंदोरैछ, खुपडी नि कुहिंदोरहेछ,
आशाहरू तुहिंदोरहेछ, त्यो नभए'सी !
हात रित्तो हुदैं जान्छ, यहां त्यो नभए'सी ।
Posted by KhullaManch TV Links to this post Labels: साहित्य
निस्कपट अंधेरी रातमा निद्राको प्रबाह नगरि
शितल जुनलाई पर्खिबसेको छु म ।
बाटो वरपर चराको चिर्बिर चिर्बिर बिच
एउटा कोइली एकतमासले रोइरहेकी छ,
उसको पिडाको रोदन सहन नसकी
संगितको धुनलाई पर्खीबसेको छु म ।
अनकन्टार मरुभुमी परदेशको ठाउंमा
छिचोलेल्ला भन्छु रात एक्लै टोलाउंदै,
यो आंतलाई कसैगरी नसकेसी बुझाउन
प्रभुको सगुनलाई पर्खिबसेको छु म ।
श्रद्धान्जली गिरिजाबाबु :
“प्रजातन्त्रको लडाइंमा कसैको हार हुदैन सबैको जीत हुन्छ। मेरो इच्छा छ कि अब मैले जस्तो जीवनभरिनै भावि पुस्ताले प्रजातन्त्रकालागि लडिरहन नपरोस।“ --- गिरिजा प्रसाद कोइराला
स्वतन्त्रताका लागी आफ्नो जीवन भर प्रजातन्त्रका लडाई लडेका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिर्ष सेनानी, निर्भिक र दृढनिश्वयी राजनेता श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को दोश्रो बार्षिकिको पुण्य तिथिका अबसरमा दिबंगत आत्माको चीर शान्तीको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धान्जली !!!
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेता शिखर पुरुषको अभाबले गांजिरहेको मुलुकमा उनको सपना साकरका लागी, संबिधान निर्माण र नयाँ नेपाल पुन:स्थापनाको लागि बल मिलोस । श्रद्धान्जली गिरिजाबाबु !
Posted by KhullaManch TV Links to this post Labels: राजनीति
मेरो अनि छिमेकी ब्लग खोज्नुहोस् !
खुल्लामन्च छिमेकीहरु :
तपाईको बिचार :
खुल्लामन्च वरपर :
۩ शङ्कर लामिछाने स्मृति घर :: Shankar Lamichhane Smriti Ghar
•अनलाइन खसखस• OnlineKhaskhas•
हाम्रा प्रकाशनहरु !!
मेरो फेसबूक पाना :
खुल्लामन्च आगन्तुक पुस्तिका :
एउटा बिरामीको बिछोड प्रेम कथा :
तिमीलाई लेखेको चिठी :
सालाहरुको गोलिमा डराइमर्नु जिन्दगी :
कात्रोमा खल्ति नहुनेरहेछ !
हाम्रो सर्कल ब्लग फिड :
आजको पात्रो :
फेसबूक संजाल :
अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज
नेपाल सरकारको वेब
नेपाली ब्लगरहरूको मुल घर
खुल्लामन्च भित्र :
परदेशिको कथा (6)
पाहुनाको कलम (1)
समबेदना । (2)
प्रकाशित सामाग्रीहरु :
खुराफातमा रम्ने नेपाली मानसिकता र नेपाली संस्थाहरु...